China SD6N Bulldozer Mugadziri uye Mutengesi | Xuanhua
SD6N bulldozer ndeye 160 horsepower track-type dozer ine hydraulic yakananga drive, semi-rigid yakaturikwa uye hydraulic kutonga. Iyo yakagadzirirwa Shangchai C6121 injini yedhiziri inogadzirwa pasi peCaterpillar rezinesi. Injini ine hunhu hombe torque reserve coefficient ...
SD6N bulldozer ndeye 160 horsepower track-type dozer ine hydraulic yakananga drive, semi-rigid yakaturikwa uye hydraulic kutonga. Iyo yakagadzirirwa Shangchai C6121 injini yedhiziri inogadzirwa pasi peCaterpillar rezinesi. Injini ine hunhu hombe torque reserve coefficient uye kugona pamusoro pamusoro-pamusoro-mutoro. Iyo torque inoshandura ihydro-mechanical converter iyo simba rakakamurwa kunze, iro rine hunhu hwehupamhi hwepamusoro hwekugona huwandu Steering uye braking zvinogona kudzorwa neiyo imwechete control lever. Braking system inoshandisa hydraulic inowedzera chimiro, iri nyore uye inoponesa basa. Yekupedzisira dhiraivha giya ine hunhu hombe yekufambisa yekukosha kukosha. Rudzi urwu rwekugadzira runosimudza kutakura huremu uye runowedzera nguva inobatsira. Dhiraivha yekupedzisira inoshandisawo chimiro chekuti kubvumidzwa kwayo kusununguka kwekugadzirisa, iko kuri nyore kuita sevhisi. Iyo yakaenzana bhaa inoshandisa yemahara lubricating chimiro kudzikisa sevhisi mutengo.
Kumanikidza kwepasi (kusanganisira ripper) (KPa): 55.23
Min. Chibvumirano chevhu (mm): 445
Nereza upamhi (mm): 3279
Max. kuchera kudzika (mm): 592
Zviyero zvese (mm): 503732973077
Flywheel simba (KW / HP): 119/162
Rated peturu yekushandisa (g / KWh): 215
Pamberi (Km / h) 0-4.0 0-6.9 0-10.9
Kudzokera (Km / h) 0-4.8 0-8.4 0-12.9
Shanduro kuburitsaL / min: 178
Torque converter: Kunze kwekuparadzanisa kusangana
Yekupedzisira dhiraivha: Yekupedzisira dhiraivhi yakapetwa kaviri ne spur giya uye chidimbu sprocket.
Pashure: TY160-3 Bulldozer
Zvadaro: TS160-3HW Bulldozer